Paweł एम।, स्मार्टमीमा लेखक
द्वारा पोष्टहरू पाववे एम
डोम » लेख Paweł एम द्वारा प्रकाशित
कार्डलक्स ईयरबड्स वाशर, ताररहित हेडफोन, tws हेडफोन, tws
एक उपकरण किकस्टार्टरमा भर्खरै आएको छ जुन वायरलेस इन-ईयर हेडफोन सफा राख्न मद्दत गर्दछ। कार्डलक्स ईयरबड्स वाशर एक सानो वाशिंग मशीनसँग मिल्दोजुल्दो छ र यो प्रकार्य पनि गर्दछ। के खरीद मूल्यवान छ? धेरै बारम्बार प्रयोग
क्यासियोले पहिलो जी-शक लगाउने ओएसको साथ प्रस्तुत गर्दछ
Casio, g-shock, ओएस लगाउनुहोस्
कासियोबाट जी-शक बख्तरबन्दी घडीको श्रृंखला कसैलाई परिचय गराउन आवश्यक छैन। जापानी निर्माताले Google Wear OS को नियन्त्रणमा नयाँ मोडल अपरेटिंग सुरू गर्ने निर्णय गरे। यो धेरै रोचक लाग्दछ, तर यो कस्तो हुनेछ ...
एक नयाँ नयाँ रिमोटको साथ एप्पल टिभीको नयाँ पुस्ता?
एप्पल टिभी +, sir रिमोट
यो निश्चित छ कि कपर्टिनोको कम्पनीले हाल एप्पल टिभीको नयाँ जेनरेशनमा काम गरिरहेको छ। भर्खरका रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि उपकरणसँग रिमोट कन्ट्रोलले सहयोग पुर्‍याउँदा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू देख्न सकिन्छ। यो अझै हुनेछ ...